गर्दनको दुखाइ निको पार्न के गर्ने ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com गर्दनको दुखाइ निको पार्न के गर्ने ? - खबर प्रवाह
काठमाडौं । लगातार कम्प्युटरमा काम गर्ने वा एउटै पोजिसनमा बसेर काम गर्ने हाम्रो बानीले शरीरलाई नोक्सानी पु–याउँछ । यसको सबभन्दा धेरै असर गर्दनमा पर्छ । हामीले दिनमा जम्मा एकदुईचोटि गर्दन घुमाउँछौं होला ।